Izazi Ezintathu zizohambisana namakhaza nemvula eSpain | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izazi Ezintathu zizohambisana namakhaza nemvula eSpain
Abantu abaningi, ikakhulukazi izingane, bakubheke ngabomvu ukufika kwamaKhosi Amathathu, usuku abazothola ngalo izipho nenjabulo. Kepha kulo nyaka kuzoba isikhathi sokuhlanganisa kahle, njengoba kulindeleke ukuthi indawo ebandayo izothinta inhlonhlo ngosuku olungaphambi kokufika kwamakhosi abo kakhisimusi.
Ngokwezibikezelo, isimo sezulu sizoba "uhlanya": singaze sishise emini kodwa ebusuku sizodinga ijazi elihle ukugwema ukubanjwa umkhuhlane.
1 Kuzoba yini ukushisa?
2 Ngabe kuzoba khona izimvula?
Kuzoba yini ukushisa?
Ukushisa, njengoba sibona esithombeni, kuzoba mnandi kakhulu emini, ikakhulukazi kulo lonke ugu lwaseMedithera naseziqhingini ezimbili (iBalearic neCanary Islands), lapho amazinga okushisa angathinta futhi angadlula ngisho nama-20 degrees Celsius. Engxenyeni esenyakatho yenhlonhlo imvelo izoba epholile ngandlela thile, 10-15ºC.
Ebusuku amazinga okushisa azokwehla, ikakhulukazi kusukela ngoLwesihlanu lapho izinga leqhwa lizokwehla liye kumamitha ayi-600-700 enyakatho yezwe.
Ngabe kuzoba khona izimvula?
Iqiniso ngukuthi yebo. Abahlakaniphileyo abathathu bazoba nezinkinga eziningi ngesikhathi seParade nasekulethweni kwezipho. Ingaphambili lizongena ngasentshonalanga nenhlonhlo, kushiye izimvula ezinkulu eGalicia, e-Asturias, eCastilla y León, e-Extremadura, eMadrid, eCantabria, ezweni laseBasque futhi, ngokujwayelekile, kuyo yonke le ndawo, ziyindlala kakhulu eziqhingini zaseBalearic.
Ukuze, sizoba nokuphela kwamaholidi kaKhisimusi adluliswa ngamanzi, nesibhakabhaka esinamafu futhi sigqoke izingubo zasebusika. Kepha akukho monakalo ongafiki: lezi zimvula zizosiza amadamu ukuthi aqhubeke nokugcwalisa, into ezoba wusizo ikakhulukazi ehlobo.
Ngiyethemba ukuthi le ndatshana ibilusizo kuwe nokuthi ungaqeda ukujabulela uKhisimusi, noma ngabe unejazi lemvula 🙂.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Izazi Ezintathu zizohambisana namakhaza nemvula eSpain
Siyoba njalo isimo sezulu eziQhingini zaseBalearic ngo-2038